China T-uwe elu ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọhụụ
Nwa Kid bụ ihe dị nro na nke dị mma na uwe elu t-shirt nke 100% slub. Lightdị uwe a na-acha ọkụ ọkụ, nke na-arụ ọrụ n'olu dị mma mgbe ị na-achọ ihe nwere ụdị mmetụta dị mma. * 100% slub cotton na-enye uwe elu ahụ ezigbo aka-na-eche na nke ahụ zuru oke maka ngwa mbipụta ọ bụla na-egosipụta ihe kwesịrị ekwesị nke oge a nke na-egbochi ya ịchọ igbe.
Comfortable nwere ezigbo ihu igwe dị mma maka otu ọ bụla. A na-enweta ya n'ọtụtụ dịgasị iche iche na njirisi dị mma, ngwaahịa a ga-egbo mkpa nke otu gị na ọnụahịa ị ga-ahụ n'anya.
Typedị ngwaahịa Omenala Kid T uwe elu
Ihe onwunwe 100% slub owu
Ricdị ákwà Obodo Jersey
Gram ibu 150gsm, ma ọ bụ dịka achọrọ
Nke gara aga: Tank Top
Osote: larịị omenala logo ajị anụ pink dobe ubu cropped hoodies maka ụmụ nwanyị
Achara T-uwe elu maka ụmụaka
Kid uwe elu
Soft Bamboo T-Uwe maka ụmụaka